Ukuphupha i-Ikarus ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Njengawo nawuphi na umntu, u-Icarus ubonakalisa ukungamampunge komntu kunye nomnqweno wakhe omkhulu: umnqweno wokubhabha njengentaka. Ngokwentsomi yamaGrike, u-Icarus kunye noyise uDaedalus babanjwa eKrete.
Kuba kwakungenakwenzeka ukuba abaleke ngamanzi okanye umhlaba, uDaedalus wazenzela amaphiko kunye nonyana wakhe ngeentsiba kunye ne-wax. Uxelele u-Icarus ukuba angabhabhi phezulu kakhulu njengoko ubushushu belanga bunyibilikisa i-wax. Kodwa u-Icarus wakhukhumala, wanyuka waya phezulu, kwaye ubushushu belanga bunyibilikisa i-wax kumaphiko akhe njengoko kwakuxelwe kwangaphambili. Wawela elwandle, warhaxwa. Ukuzikhukhumalisa kwakhe kwakhokelela ukufa U-Icarus, kunye nezinye iimbongi isiphoso ikwangumsindo woothixo, abohlwaya uDaedalus ngolwaphulo-mthetho lwangaphambili ngokweba unyana wakhe. Ukusukela ekudalweni kwentsomi, imbali yathathwa kubugcisa nakwimibongo, kwaye u-Icarus unokuvela emaphupheni ethu. Kodwa kuthetha ntoni xa siphupha ngayo? Ngaba u-Icarus ukwamele impindezelo kaThixo ekutolikeni amaphupha?
1 Uphawu lwephupha «Icarus» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «Icarus» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Icarus» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Icarus» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Isimboli yamaphupha "Icarus" itolikwa ngokungaqondakaliyo kutoliko lwamaphupha ngokubanzi. Ukuba u-Icarus ophuphayo uyabona ngelixa ebhabha okanye ezibona njengo-Icarus, eli phupha lokubhabha linokubonisa ukuba ubaleka into ethile. Yenziwe ngento gratisoko bekukhathaza ixesha elide okanye waphula imithetho ebekwe ngabanye kuwe. Nangona kunjalo, kufuneka alumke angaziphakamisi kakhulu, kungenjalo uya kuwa kwaye asilele njenge-Icarus. Ukwahlulwa kweemeko zobomi bangaphambili nako kunokuba Ukubaleka Kuthetha ukuba u-Icarus kunye noyise babaleke njani ekuthinjweni. Ukutolikwa ngokuchanekileyo ngakumbi, iimeko zokuhlala ephupheni kufuneka zisetyenziswe.
Elinye ithuba lokutolika iphupha lika-Icarus kukuba ukuphupha sele kuninzi kakhulu ikratshi yi. Kule meko liphupha elilumkiso. Ukuphupha kunokuxhomekeka kakhulu kwithamsanqa lakho kwaye ulahlekelwe yimvakalelo yokwenyani. Uziva ngathi u "flier" kwaye uziva engenakoyiswa. Nangona kunjalo, njenge-Icarus, ukuba awulumkanga, uya kuwa ngokunzulu.
Uphawu lwephupha «Icarus» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, olu phawu lwephupha luhlala lubonisa Uloyiko lokusilela yokuphupha. Uyoyika ukuwela nzulu kwaye akoyiki ukuyila nantoni na. Ungoyiswa lulindelo lwabanye. Ukuphupha kufuneka kukhunjulwe ukuba yeyiphi imvakalelo ebikhona ngexesha lephupha. Ngaba ukhe wayonwabela inqwelomoya ngaphambi kokuba uqaphele ukuba ngumngcipheko omkhulu? Mhlawumbi angaziva emhle ngaye khuthazaukulungisa into ibenye. Kwelinye icala, inokuba kusenokwenzeka ukuba i-subconscious iyalazisa iphupha ukuba nalo ngokwalo Akanankathalo kakhulu iyaziphatha.
Uphawu lwephupha «Icarus» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, uphawu lwephupha luyalumkisa Ukuqonda nelize lomntu. Ukuphupha kufuneka kwihlabathi eliphezulu musa ukuba nomsindo.